सुजी शापिरोका लेखहरू अन Martech Zone |
द्वारा लेखहरू सुजी शापीरो
CX / UX - केवल एक अक्षर भिन्न छ? ठीक छ, एक भन्दा बढि अक्षरहरू, तर त्यहाँ ग्राहक अनुभव र प्रयोगकर्ता अनुभव काम बीच धेरै समानताहरू छन्। या त ध्यान केन्द्रित साथ पेशेवरहरूले अनुसन्धान गरेर व्यक्तिहरूको बारेमा सिक्न काम गर्छन्! ग्राहक अनुभव र प्रयोगकर्ता अनुभव ग्राहक र प्रयोगकर्ता अनुभव लक्ष्य र प्रक्रिया को समानता अक्सर समान हो। दुबैसँग छ: एक अर्थ छ कि व्यापार केवल बेच्ने र किन्नेको बारेमा छैन, तर आवश्यकताहरू सन्तुष्ट पार्न र मूल्य प्रदान गर्ने बारेमा